ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး MRTရထားစမ်းသပ်ပြေးဆွဲ - Xinhua News Agency
ဒါကာ၊ သြဂုတ် ၃၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဒါကာတွင် နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး MRTရထားဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည့် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ရထားလိုင်းအမှတ် ၆ (MRT-6) ၏ ၂၀.၁ ကီလိုမီတာ စီမံကိန်း အပိုင်းတစ်ပိုင်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ က စမ်းသပ်ပြေးဆွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းစမ်းသပ်ပြေးဆွဲမှုအတွက် ဒါကာမြို့ရှိ ဘူတာမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် တံတားများဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Obaidul Quader က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ရထားတွဲပေါင်း ၆ တွဲပါဝင်သော စမ်းသပ်ပြေးဆွဲမှုတွင် ခရီးသည်တင်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲ ပထမဆုံး ဘူတာမှ စတင်ထွက်ခွါပြီးနောက် ကြားဘူတာ ၃ ခုအားဖြတ်သန်းကာ အသွားအပြန် ပြေးဆွဲခဲ့သည်။
စမ်းသပ်ပြေးဆွဲမှုများနှင့် စစ်ဆေးမှုများအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ပါက ရထားအား လာမည့်နှစ်တွင် အများပြည်သူအသုံးပြုနိုင်ရန်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ရထားဝန်ဆောင်မှုအပြင် တရုတ်နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောက်လုပ်မှုဖြင့် ပြီးစီးလုပြီဖြစ်သော ပတ္တမာတံတားနှင့် ကာဏပူလီမြစ်ကူးဥမင် စီမံကိန်း နှစ်ခု အပါအဝင် အခြေခံအဆောက်အဦစီမံကိန်းကြီးများ ကိုလည်းဖွင့်လှစ်သွားရန်ရှိကြောင်းဝန်ကြီးကဆိုသည်။
ဒါကာအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် DMTCL သည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒါကာမြို့တွင် ရထားလမ်းများဖောက်လုပ်ရန် တည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၂၀.၁ ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိသည့် MRTရထားလမ်းအား အပိုင်း ၈ ပိုင်းခွဲကာ တရုတ်နိုင်ငံ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများမှ လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ဖောက်လုပ်လျက်ရှိသည်။
ရထားလမ်းအမှတ် ၆ တွင် ဘူတာရုံပေါင်း ၁၆ ခုပါရှိပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပို့လွှတ်ပြေးဆွဲနိုင်သည့် ရထားလမ်းများကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံပိုင် Sinohydro Corporation Limited နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည် Italian-Thai Development Public Company Limited တို့က MRT လိုင်းအမှတ် ၆ အားပူးပေါင်းတည်ဆောက်ရန် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလ တွင် သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံအတွင်း MRTရထားလမ်းစီမံကိန်းအား အဆင့် ၃ ဆင့်ဖြင့်တည်ဆောက်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအေဂျင်စီ JICA မှ ချေးငွေရယူပြီး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
MRTရထားလမ်းတည်ဆောက်ရေးသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ အစိုးရ၏ ဒါကာမြို့တွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအခက်အခဲအား ပြေလျော့စေသည့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူက အစောပိုင်းကဆိုသည်။
စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ပြီးပါက လေအေးပေးစက်များတပ်ဆင်ထားပြီး ကျယ်ဝန်းသည့် တွဲပေါင်း ၆တွဲပါသော ရထားတစ်စင်းသည် ၄ မိနစ်တစ်ကြိမ် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်ပြီး တစ်နာရီလျှင် ခရီးသည်ပေါင်း ၆၀,၀၀၀ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
DHAKA, Aug. 30 (Xinhua) — Bangladesh’s first metro rail in the capital Dhaka made the trial run Sunday onasection of the 20.1-km project, known as Mass Rapid Transit Line-6 (MRT 6).
The test run was flagged off by Bangladeshi Road Transport and Bridges Minister Obaidul Quader at its depot in Dhaka.
According to the minister, if all trials and inspection go well, the train will be launched for public use next year when the country’s two more mega infrastructure projects including Padma Bridge and Karnaphuli river Tunnel, under construction by Chinese firms, will also be inaugurated.
Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL),aBangladeshi state-owned enterprise founded to implement the metro rail lines across Dhaka, is constructing the 20.1-km metro rail line, divided into eight packages, in collaboration with companies from China, Japan and other countries.
ရတနာပစ္စည်းပေါင်း၂သိန်းဖြင့်စီခြယ်သော ကောင်းကင်ဘုံကျောင်းတော် ပုံစံငယ်လေး